တတ်နိုင်နှင့်ကြံ့ခိုင် SEO ကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာရေး Tools များ
ငါတို့မျက်စိကိုမြင်ရပြီ SERPS.com အခုခဏ တည်ထောင်သူ Scott Krager ကျွန်တော်တို့ကိုကန ဦး ဗားရှင်းတွေကိုပြပြီးငါတို့တကယ်သဘောကျခဲ့တယ်။ ငါတို့ဝေစုကိုသုံးတယ် SEO စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးကိရိယာများ မတိုင်မီ။ သို့သော် SEO ဆိုသည်မှာပြောင်းလဲနေဆဲဖြစ်သည်... နှင့်များစွာသော tools တွေကိုဖွင့်ထားရှိမည်ကြပြီမဟုတ်။
Scott ၏အဖွဲ့သည်အပြောင်းအလဲကိုလက်ခံခဲ့ပြီး၊ လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောစနစ်တစ်ခုနှင့်အမှန်တကယ်ပေါ်ပေါက်လာသည်။ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်သည့်စွမ်းရည်ရှိသည် Google Analytics, လူမှုရေးညွှန်းကိန်းကိုစောင့်ကြည့်အတိုင်းအတာ စမ်းသပ်မှုကး - အားလုံးတတ်နိုင်သမျှချောမွေ့စွာအသုံးပြုသူ interface ကိုမှတဆင့်။ သို့သော်၎င်းသည် starter platform တစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ။ … SERPs ကသင့်ကိုနိုင်ငံတကာကပါစမ်းသပ်ခွင့်ပြုသည် 65 နိုင်ငံများတွင်ကျော်!
Scott သည်အဓိကကွဲပြားခြားနားသောအချက် ၄ ချက်ကိုပလက်ဖောင်းသို့ထောက်ပြသည်။
ကျွန်တော်တို့၏ SEO စမ်းသပ်မှု အင်္ဂါရပ်ကယ့်ကိုသပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။3ခလုတ်နှိပ်ပြီး SEO နှင့်ပတ်သက်သည့်စစ်ဆေးမှုကိုသင်ပြုလုပ်နိုင်သည်၊ အဘယ်အရာလုပ်ဆောင်နေသည်၊ သင်၏နေရာတွင်အဘယ်အရာမရှိကြောင်းကြည့်ရှုနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်သော့ချက်စာလုံးများအဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည်ခိုင်မာစွာပေါင်းစည်းထားပါသည် Google Analytics ဒါကြောင့်သင်တစ်နေ့တာတွင်သင့်အတွက်အနိမ့်ကျနေသောအသီးဆိုတာဘာလဲဆိုတာသင်မြင်နိုင်သည်။
ဒိုင်ခွက်သည်သင့်အားခွင့်ပြုသည် ဆိုဒ်များမှတဆင့်လျင်မြန်စွာသံသရာ နှင့် site တစ်ခုစီအတွက်အခြေခံကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ပါ။ ဆိုဒ်မျိုးစုံကိုစီမံမယ်ဆိုရင်ကောင်းပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့၏ စာမျက်နှာ -Level အမြင် သင်၏မျက်စိကိုသွေးမထုတ်သောဇယားတွင်အဆင့်များ၊ အသွားအလာနှင့်လူမှုရေးမက်ထရစ်များအကြားဆက်စပ်မှုကိုအလွယ်တကူတွေ့မြင်နိုင်သည်။
ဤနေရာတွင်လာမည့် SEO စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှု dashboard ၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို SERPs ၏ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
အဲ့ဒီထဲက application တော်တော်များများဟာတစ်လကိုရာနဲ့ချီတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာကုန်ကျနေပေမယ့် SERPs တွေကတော့ တစ်လလျှင် $9မှာစတင်သည်... မည်သည့်စျေးကွက်သမားမဆိုတတ်နိုင်သောစျေးနှုန်း (နှင့်အကျိုးရှိသင့်သည်) ။ သူတို့၏အကြီးမားဆုံးသောအထုပ်သည်စာမျက်နှာ ၅၀၀၀ ၌သော့ချက်စာလုံး ၁၀၀၀ ကိုတစ်လလျှင် ၉၈ ဒေါ်လာဖြင့်ရှာဖွေရန်ခွင့်ပြုသည်။ မဆိုးသည်။ စတင်ပါ ယခု 14 ရက်ရုံးတင်စစ်ဆေး!
Tags: analytics googleseoseo စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးseo ပလက်ဖောင်းseo စမ်းသပ်ခြင်းseo tool ကိုseo tools များမြွေ
6:2012 pm မှာဇွန် 4, 54
Yaa သူငယ်ချင်းများ၊ Google Analytics သည်တကယ်ကောင်းတဲ့ seo tool နှင့် Webmaster tool တစ်ခုဖြစ်သည်